Ihe ngosi ohuru nke Moto Z putara otu ubochi mgbe ngosi | Gam akporosis
Ihe ngosi Moto Z ohuru n’egosi ka uzo ato di na agba
Otu ụbọchị mgbe ọkwa ọkwa gọọmentị nke ọkọlọtọ Moto Z nke anyị ga-ahụ site na Lenovo Tech World, ugbu a anyị enwetala teaser ọzọ nke na-eweta ụfọdụ nkọwa karịa onye ọzọ, dị ka echiche ahụ enyere agba na atọ dị iche iche ga-etinye anyị n'ihu ọnụ ọnụ nke yiri ị ga-apụ na omume ọla ahụ.
Site na ihe enwere ike ichota na mpempe akwụkwọ ntaneti a, mkpanaka ga - enwe ụdị dị iche iche dị iche iche dịka otu isi awọ, ụdị ọla edo nke ahụ bilitere nke anyị na-ahụkarị n'ọtụtụ mbipụta ọpụrụiche ụfọdụ ekwentị. Anyị nwere ike ịgbaso usoro ahụ nke ekwentị na agba ọla edo nke ghọrọ ọkọlọtọ kemgbe ojiji nke ụda a na iPhone 6 kemgbe 2014.
Ihe ọzọ dị iche iche nke teaser bụ na Z abụghị ụdị dị na mgbasa ozi ahụ, mana Moto pụtara, nke na-eduga na ihe anyị ga-ahụ smartphones ndị ọzọ na Lenovo Tech World. Ọdịdị nke akara Moto metụtara eziokwu ahụ bụ na Lenovo ka na-atụ ụjọ na njikọ a nke ekwentị ndị a furu efu na ihe ndị Motorola kere, yabụ anyị ka ga-ahụ ya ebe ọtụtụ nde mmadụ na-eji echiche nke ika a di na aka ozo.
Na ụdị abụọ nke Moto Z, anyị nwere Vector mkpa, nke ga-abụ nke ga-anọchi Moto X Style, dị ka anyị zutere n'izu gara aga, na nke a ga-eji mara 5,5-anụ ọhịa QHD AMOLED ihuenyo, Snapdragon 820 quad core chip, 3 / 4GB nke RAM, 32GB nke nchekwa dị n'ime na 13 MP kamera azụ. Nke ọzọ bụ Moto z Vertex, ọ ga-anọchi Moto X Play na ihuenyo 5,5 ″ FHD AMOLED, mgbawa Snapdragon 625, 2GB RAM na 16GB nke nchekwa dị n'ime. Ọ ga-enwe ụdị nke 3GB RAM na 32GB nke ebe nchekwa dị n'ime ya na ndị smartphones ndị ọzọ.
Echi, anyị ga-enweta ozi niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe ngosi Moto Z ohuru n’egosi ka uzo ato di na agba
Twitter na-emegharị onwe ya na Ihe eji eme ihe na menu igodo, bọtịnụ FAB na ndị ọzọ
ZTE mara ọkwa na Nubia Z11 Max nwere ihu 6, Snapdragon 652 mgbawa na 4GB RAM